RABSHADAHA: QAABABKA DEGITAANKA IYO DARYEELKA EE XAALADAHA GURIGA (QOLKA) - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo koro Rinkebyada dheriga
Hyacinth waa ubax caalami ah oo aan kori Karin oo kaliya beerta, laakiin sidoo kale guriga, waxa ugu muhiimsan waa in la abuuro shuruudaha wanaagsan ee tan.
Ka fikir waxa aad u baahan tahay si aad u ogaatid si dahab ah dheriga loogu talagalay ubax, iyo nooca daryeelka guriga ee u baahan doona.
Hyacinth waxaa iska leh qoyska of asparagus. Waa tuubo calaamad ah, oo laga helo inflorescence cufan oo cagaar ah. Caleemaha si tartiib tartiib ah u furan, iyo inflorescence ayaa midabtako leh. Peduncle waxay ku kori kartaa ilaa 30 cm, halka ay ku jirto cufan yar oo ubaxyo yar yar ah oo lagu ururiyo burushka. Celcelis ahaan, hal stem wuxuu muujinayaa ilaa 30 ubax oo uumaysta caraf xoog leh.
Ma taqaanaa? Magaca Laatiinka ee geedka - Hyacinthus. Magaca ayaa ka yimid magaca geesiga ee mitiriga Giriigga - nin dhalinyaro ah oo magaciisa lagu magacaabo Hyakintos, kaas oo qoraxda qorraxda ee Apollo uu jacayl u ahaa. Maalin maalmo ah intii lagu gudajiray maqal dhagax ah, Zephyr, ilaahii West Wind Wind, oo sidoo kale lagu magacaabo Hyakinthos, ayaa dhimatay oo ay ku dhaawacmeen wiil yar oo masayr ah. Meeshii dhiigga daadsanaa ee Hyacinthus, ubax soo jiidan ayaa koray, kaas oo Apollo loogu magac daray gabar la dilay.
Rinkebyada midabkiisu wuu ka duwanaan karaa. Noocyo Maanta waxaa lagu jajabiyey ubaxyo fudud oo aad u ballaadhan, marka laga reebo barafka iyo xitaa ubaxyo midab leh. Ka dib markii ubax oo dhan caleemaha dhulka ku dhinta. Geedka ubaxa cusub wuxuu ka soo baxayaa buro yar oo u muuqata guluubka hore.
Khamrada - ubax, beerid iyo daryeel aan u baahnayn aqoon iyo xirfado gaar ah, laakiin guriga dhexdiisa, waxyaabo yaryar ayaa muhiim ah.
Sida warshad kale, raajada ayaa u baahan shuruudo gaar ah oo sida ugu wanaagsan u saameeya koritaankooda iyo ubax dambe. Ka feker sida loo beerayo dahabiga guriga ee dheriga iyo waxa aad u baahan tahay inaad ogaato.
Heerkulka hawada iyo qoyaanka
Xilliga xididada, heerkulku waa inuu ahaado wax ka badan 5 ° C. Caleemaha ka dib marka la eego, heerkulku waa la kiciyaa ilaa heer 12 ° C. Ka dib muuqaalka korrinka ayaa dooranaya meel joogto ah. Waqtigaan, mid ka mid ah xaaladaha ugu muhiimsan ee koritaanka waa in la hubiyo heerkul deggan, kaas oo ah in ay noqoto 18 ° C Qalabka iyo dhibcaha heerkulka ayaa si xun u saameyn doona kobaca ubaxa. Dhulku waa inuu mar walba qoyan yahay. Qoyaanku waa in la xoojiyaa si aysan geedku u baahnayn qoyaan.
Sida jilicsan, qoyska Asparagus waxaa ka mid ah iglitz, yucca, asparagus, cordilina.
Ka dib markii laga beerto, ubaxa waxay u baahan tahay madow buuxa. Meelahaas oo kale ah waa inay ahaataa ilaa 8 toddobaad. Ka dib markii afkoda u muuqdaan, waxaa loo wareejiyaa meel dabaysha, laakiin ma aha qorraxda.
Iyada oo ay soo baxdo burooyinkeeda, dheriga dhirta leh waa in la dhigaa meel fiican oo iftiin leh. Haddii kale, haddii aad jeceshahay inaad ku raaxaysatid rinjiyaal, waa inaad sameysatid iftiin macmal ah.
Substrate for beerto
Wixii beerto ee nalalka dooro carrada bacrin ah oo leh qadar ballaaran oo ka mid ah arrinta organic iyo acidity dhexdhexaad ah ama substrate ee peat iyo ciid. Dheriga waa in ay ahaato mid daadi ah. Wixii Moss this ideal waa fiican, taas oo ka dhigi doonta ciidda dabacsan iyo qoyaan-qaadashada.
Sidee u kobcin karaa jaceylka guriga?
Si ugu dambeyntii loo helo geedka ubax, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa la sameeyo si loo abuuro ubax caafimaad leh.
Waa muhiim! Koboca roogaga ee guriga ayaa leh hal shay - ubax ma dhicin karaa dhowr sano oo isku xigta. Tan iyo markii ubaxyada ee raaxada loo isticmaalo ubax, nalalka waa la daciifiyay, taas oo macnaheedu yahay in guriga ay koraan karaa wax ka badan 2 sano.
Xulashada iyo diyaarinta nalalka
Ka hor intaadan beeran, waxaad u baahan tahay inaad doorato alaab wanaagsan. Khubarada waxay ku talinayaan in ay doortaan nalalka leh dhexroorka ugu yaraan 5 cm. Xaaladdan oo keliya, ubaxyada buuxa ayaa kori doona.
Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in ay cufan, iyada oo aan lahayn qudhuun ama waxyeello kasta. Ka hor intaan la dhicin, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo xal jeermis.
Dad badan oo raba inay koraan ubaxyadaas, waxay la yaabaan sida loo beero nalalka jilicsan ee guriga dheriga. Ka dib markii la diyaariyo dhamaan beeraha bilowga muhiimka ah. Waxaa la ogyahay in laga bilaabo hal ilaa seddex nalalka lagu dhex beeri karo hal weel.
Dheriga waa in la qaadaa si ay u fariistaan ​​meel u dhow, masaafada u dhexeysa waa in aysan ka badnayn 2 cm. Qeybta hoose ee dheriga ayaa soo saaraa dheecaan iyo daboolay ciidda lagu qaso ciid. Nalalka waxaa lagu dhajiyaa dusha sare, si markaasi ka dib loo soo dhejiyo, dushooda waa inay ka sarreeyaan dhulka.
Sida loo daryeelo ubaxyada
Si loo kobciyo Rinkebyada quruxda badan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato nooca daryeelka ay u baahan yihiin. Sida bannaanka u hubin, waa mid fudud oo ka mid ah:
Ma taqaanaa? Waxaa la og yahay in qarnigii la soo dhaafay Faransiiska ay u isticmaashay ubaxyadaas si ay u sumoobaan dadka aan fiicnayn. Waxay si fudud ugu riixeen bouquet leh sunta oo waxay u dhowdahay dhibanaha. Carafku wuxuu udhaxaaday urkastiisa, sidaa darteedna wuxuu sameeyay habkan.
Ubaxa sida ciidda qoyan, laakiin waxay u jiheysan karaan sababo badan oo ah qoyaan. Hawshan waxaa lagu maamulaa dheecaan, iyo biyaha haray waa in la nadiifiyaa iyada oo aan dhicin. Waraabinta waa in si taxadar leh loo sameeyaa si aysan dareeruhu uugu dhicin burooyinkeeda ama sinuska caleemaha.
Waxa kale oo aad xiiseyn doontaa inaad wax ka barato beerista jajabka jiirka.
Dheriga, dhulka ayaa si dhaqso ah u daalaa, sidaas darteed aad bay muhiim u tahay in si nidaamsan loo quudiyo jilibka.
Marka nalalka ay yihiin nasasho, waxaa lagu talinayaa in ay iyaga kula saydhaa xal daciif ah Bacriminta fosfooraska-potassium.
Warshad ubax ah waa in la quudiyo laba jeer bishii iyaga oo leh daawooyin si ay u kiciyaan ubax.
Dad badan oo ka mid ah milkiilaha sida ubax waxay xiiseynayaan waxa la samaynayo jilicsan ee dheri ka dib ubax. Si uu u badbaadiyo noloshiisa, gooyaa caws ubax iyo joojiso waraabinta iyo bacarimiso. Inta lagu jiro wakhtigan, basasha hooyada ayaa la soo celiyay, carruurta ayaa la sameeyay.
Waa muhiim! Rinkebyada waxaa lagu kori karaa marinka biyo. Awoodda ku habboon waa mid u eg midabka saacad-yar. Ka hor intaan la dhicin, biyaha roobka ayaa lagu shubay qaybta hoose iyo basasha ayaa la dhigayaa dusha si ay si dhib leh u taabato biyaha.
Ka dib marka qaybta kor ku xusan ee gebi ahaanba qalalan yahay, dahabiga ayaa laga soo saaraa dhulka, lagu nadiifiyey caleemaha, waana la qalajiyey ilaa 3 cisho. Dhamaadka waqtigan, carruurtu waa kala go'antahay, guluubka hore waxaa lagu beeray beerta, iyo basasha yaryar waxaa lagu beeray dheriyo cusub.
Nalalka jilicsan ee naasaha ka soo baxa hooyada. Laga bilaabo sanadka laga bilaabo hal illaa 4 carruur ah ayaa la sameeyaa, wali waxaa suurtagal ah in la kordhiyo tirada nambarkooda. Si tan loo sameeyo, isticmaal jarista iyo jeexista hoose.
Mastarinta waxaa la sameeyaa ka dib marka loo baahdo mudo nasasho ah. Isticmaal shaaha yar ee nalalka gooyaa hoosta oo ku kaydi weelasha, halka gooyuhu noqonayaan sare iyo heerkulku waa inuu ahaado mid sare.
3 bilood kadib, caruurtu waa inay u muuqdaan ilaa 40 xabbo. Hadda guluubka waxaa lagu beeray karaa aqalka dhirta lagu koriyo. Carruurtu waxay kobcin doonaan kobcinta waxayna bilaabaan inay tuuraan caleemaha. Dhammaadka xilliga sii kordhaya, waxay ka soo baxaan dhulka, kala go'ay oo la beeray. Nalalka noocan oo kale ah ayaa ubaxyada ugu horreeya u bixiya 4 sano oo nolol ah.
Qaliinka wuxuu u egyahay qaabkii hore, farqiga keliya ayaa ah in ay sameeyaan jeexitaan fudud oo qiyaasta 4 gogo ilaa 0.5 sm oo qoto dheer. Iyada oo habkani kori karo ilaa 15 carruur ah, hase yeeshee way sii xoogaysan doonaan oo waynaan doonaan. Peduncles waxay u muuqdaan sanad ka hor.
Sida aad arki karto, Rinkebyadu waxay leeyihiin nidaam aan la isku halayn oo beerto iyo daryeel xaaladaha qolka, laakiin waa wax miro dhal ah. Si natiijo guuleysata, waxaad u baahan tahay inaad samayso dulqaad badan oo raac sharciyada oo idil.